SALES TERMS & CONDITIONS – Parts
Sale Conditions and Area of Validity of the Delivery
Click on the ‘Place Order’ button on the ‘Checkout ‘page for Cat® all products. The date of purchase will be set as the Date of purchase upon receipt of the order confirmation email.
Cat® ကုန်ပစ္စည်း များကို ‘Checkout‘ စာမျက်နှာမှာ ‘Place Order’ ခလုတ်ကို နှိပ်ပြီး၊ အော်ဒါအောင်မြင်ကြောင်း အီးမေးလ်ကို ရရှိသည်နှင့် တပြိုင်နက် ပစ္စည်းဝယ်ယူသည့်နေ့ Date of purchase အဖြစ် သတ်မှတ်မည် ဖြစ်သည်။
Delivery time may vary depending your home address. The approximate duration is as follow, အိမ်အရောက် ပို့ပေးသည့် ဝန်ဆောင်မှု ကြာမြင့်ချိန်မှာ သင်၏ နေရပ်လိပ်စာအပေါ် မူတည်ပြီး ကွာခြားနိုင်ပါသည်။ အကြမ်းမျဥ်း ကြာမြင့်နိုင်ချိန်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည်။
Yangon Region: 1-3 business days
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း – ၁ရက်မှ ၃ရက်အထိ
Other States & Regions: 1-5 business days
အခြားပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီးများ – ၁ရက်မှ​ ၅ရက်အထိ
If purchased items are experienced for some reason, please direct contact to following phone numbers.
ဝယ်ယူခဲ့သည့် ကုန်ပစ္စည်းများ အကျိုးအကြောင်း တစ်စုံတစ်ရာဖြင့် ကြုံတွေ့ခဲ့ပါက ကျေးဇူးပြု၍ အောက်ပါ​ ဖုန်းနံပါတ်များကိုဆက်သွယ်ပါ။
09 797 016 661
09 4548 48098
Following payment methods are available for purchases:
ကုန်ပစ္စည်း လက်ခံရရှိမှ ငွေပေးချေနိုင်သည်။
Direct Bank Transfer (In-person bank deposit, Internet banking, etc.,) to our parent company, Myan Shwe Pyi Tractors Ltd.’s KBZ Bank account as provided on following page after placing the order.
ဘဏ်သို့ Internet Banking သို့မဟုတ် လူကိုယ်တိုင်ငွေလွှဲကာ တိုက်ရိုက် ပေးချေနိုင်ပါသည်။ www.parts-mspcat.com ၏ မိခင်ကုမ္ဗဏီဖြစ်သော Myan Shwe Pyi Tractors Ltd.၏ ကမ္ဘောဇဘဏ် အကောင့်များသို့ လွှဲ နိုင်သည် ကောင့်နံပါတ်များကို ‘Place an Order’ နှိပ်လိုက်ပြီး email နောက်စာမျက်နှာတွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
Account No : 027-60302703071101
Account Name : Myan Shwe Pyi Tractors Limited.
Bank Name : Kan Baw Za Bank Ltd. (Thin Gan Gyune Branch)
Name Name2 Bank groups Bank account number Remark
MEB-2 YGN Myanma Economic Bank KT CP-000249
KBZ-KYAT-TGKN Kan Baw Za Bank Ltd. (Thin Gan Gyune Branch) KT 027-60302703071101 I Banking checking
AYEYAORWADY-KYA T-YGN AYAWADDY BANK LTD. KT 0004103010002908 I Banking checking
MEB-NAY PYI TAW. MYANMA ECONOMIC BANK LTD. KT CM-008375
CB-KYAT-YGN Co-Operative Bank Ltd KT 0078100500000191 I Banking checking
YOMA-KYAT-YGN YOMA BANK LTD. KT 007110240000008
AGD-KYAT-YGN ASIA GREEN DEVELOPMENT BANK LTD. KT 3560011000027018
ကုန်ပစ္စည်း ပို့ဆောင်မှုအတွက် အတည်ပြုပေးခြင်း
For Cash on Delivery, customer will received phone call from www.parts-mspcat.com sales team member for confirmation and start the process as soon as possible.
ဝယ်ယူသူမှ Cash on Deliveryကို ရွေးပြီး ဝယ်ယူခဲ့ပါက www.parts-mspcat.com အရောင်းကိုယ်စားလှယ်ထံမှ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုကို လက်ခံရရှိမည် ဖြစ်ပြီး၊ နေရပ်လိပ်စာများကို အတည်ပြုကာ ကုန်ပစ္စည်း ထုတ်ပိုးမှုများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို အချိန်နှင့် တပြေးညီ စတင်ပေးမည် ဖြစ်သည်။
Using Direct Bank Transfer method, customer can provideabank slip or receipt of transfer to www.parts-mspcat.com sales team at [email protected] or Viber Account No. 09791518979 or www.parts-mspcat.com’s Facebook Messenger Account. Else, the process will start asap as soon as the payment is cleared on www.parts-mspcat.com’s bank account,
ဝယ်ယူသူမှ Direct Bank Transferကို အသုံးပြုပြီး ငွေပေးချေခဲ့ပါက ဝန်ဆောင်မှု ပိုမိုလျင်မြန်စေရန် ဘဏ်မှ ငွေလွှဲ ဖြတ်ပိုင်းကို [email protected] သို့မဟုတ် Viber Account No. 09791518979 သို့မဟုတ် 09 797 016 661 / 09 4548 48098 သို့မဟုတ် www.parts-mspcat.com’s Facebook Messenger Account သို့ ပို့ပေးနိုင်သည်။
Communication with team www.parts-mspcat.com are available via multiple channels.
www.parts-mspcat.com သို့ ဆက်သွယ်နိုင်သည့် phone numbers /contact များ
Live Chat on Website Chat box
Facebook Customer Chat www.parts-mspcat.com’s Facebook
Telephone/Viber (0) +95-9- 797 016 661 / 09 4548 48098